Mora Ny Hetra Any Etazonia, Lasa ‘Nandositra’ Any i Cao Dewang, ilay Mpanjakan’ny Fanaovana Fitaratra ao Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Janoary 2017 11:56 GMT
Cao Dewang, sary avy amin'ny Weibo-n'ny Fahitalavi-panjakana Shinoa.
Vao haingana, i Cao Dewang, ilay mpanefoefo amin'ny fanamboarana fitaratra no nanapa-kevitra ny hampiasa vola maherin'ny iray lavitrisa dolara Amerikana ary hanokatra orinasa iray any amin'ny tanàna manodidina an'i Dayton any Ohio. Iray amin'ireo Shinoa maro mpandraharaha izay nisafidy ny hampiasa vola any Etazonia izy satria mahafapo ny fehezan-dalàna momba ny hetra any amin'io firenena io no sady mora ny vidin'ny tany
Satria miadana ny fandroson'ny toekarena any Shina, dia toy ny marika fanairana no fahitàna ilay hetsika, sady efa miparitaka be any amin'ireo sehatra haino aman-jery sosialy goavana shinoa ilay fitarainany momba ny havesatry ny hetra aloan'ny orinasam-panamboarana. Lasa lohahevitra mafana mihitsy ilay fehezanteny hoe ” nandositra i Cao Dewang”, ako mampita ny olan'ny sangan'ny toekarena any Shina momba ny fitotongan'ny orinasa.
Nambaran'i Cao Dewang tamin'ny Tambajotran'ny Fandraharahana any Shina tao amina tafatafa iray fa ” mihoatra 35% amin'ny tataon-ketra any Etazonia ny an'i Shina” tamin'ny fanazavany ny fanapahankeviny hampiasa vola 600 tapitrisa yuan any Etazonia, isan'izany ny fandraisany ny orinasa iray an'i General Motors taloha. Nambara taorian'ny fandrahonan'ny Filoha voafidy Donald Trump hampakatra ambony be ho 45 isan-jato ny saran'ny fanafarana entana avy any Shina mba hiarovana ny asa amerikana ilay fampiasambolan'ny vondrona Cao Fuyao.
Taona vitsivitsy lasa izay, nasian'ny governemanta Shinoa fanavaozana ny fehezandalàna momba ny hetra, hetsika natao ho fampidinana ny hetra mitambesatra amin'ny fandraharahana izany. Saingy amin'i Cao dia mbola ambony foana ny tahan'ny hetra ka mahatonga ny tombony ho “tena manify” amin'ny fanamboaran-javatra.
Notanisain'i Cao Shanshi, mpaneho hevitra ao amin'ny habaka haino aman-jery sosialy malaza Weibo tao amin'ny fanavaozana ny satany ny teboka mafonjan'ilay mpanjakan'ny fanaovana fitaratra :
Omen'i Cao Dewang ireo teboka misongadina : 1. Mihoatra 35% amin'ny any Etazonia ny hetra faobe alaina amin'ny orinasa any Shina ; 2. Avy amin'ny hetra alaina amin'ny tombony azon'ny orinasa no tena fototry ny olana ; 3. tsy mora intsony tahaka ny any Rosia, Polonina ary Eoropa afovoany ny karaman'ny mpiasa madinika any Shina ; 4. ny firongatry ny tsenan'ny trano no antony nahatonga ireo orinasa Shinoa mpanamboatra zavatra ho very vola amin'ny karaman'n hery mpamokatra ; 5. Te-hampahatsiahy ny governemanta sy ny mpandraharaha ny amin'ny loza mety hiseho no sady hampitandrina azy ireo izy.
Nankasitrahan'i Liu Shengjun, mpahay toekarena sady mpiaro ny fanavaozana lalina ny ara-ketra ihany koa ny fomba fijerin'i Cao Dewang :
Ny mpanjakan'ny fanaovana fitaratra Cao Dewang : Mihoatra 35% amin'ny any Etazonia ny hetra faobe alaina amin'ny orinasa any Shina. 40% fotsiny no hetra alaina amin'ny karama any Amerika, tsy misy ny hetra alaina amin'ny tombony azon'ny orinasa ; Raha tsorina, tsy mila mandoa hetra ny tany any Amerika ; ary raha mikasika ny angovo, dia antsasaky ny vidin'ny herinaratra any Shina ny any Etazonia, ary ny entona voajanahary dia ampahadimin'ny vidin'ny any Shina ; ny momba ny vola lany amin'ny hery mamokatra, avo valo heny amin'ny karaman'ny vozona manga any Shina ny an'i Etazonia, ary ny vozona fotsy dia avo roa heny amin'ny any Shina. Raha atambatra, dia mety ahazoana 10% mahery ny fanamboarana fitaratra any Amerika.
Hatramin'ny nandraisan'io fitantanana amin'izao fotoana izao io ny fitondrana tamin'ny 2012, dia nanao fanavaozana ara-ketra amin'ny tombony azon'ny orinasa ny governemanta mba hampihenana ny hetra any amin'ny orinasa tsy miankina, sady nampanantena fa hanalefaka ny fitsipika mifehy ny fandraharahana. Na izany aza, mpandraharaha maro no mitaraina fa tsy midina akory ny hetra ; mandritra izany fotoana izany, haingam-pitombo kokoa noho ny an'ny harinkarena anatiny (GDP) ny vola miditra amin'ny alàlan'ny hetra ao amin'ny firenena.
Zong Qinghou, vao haingana ihany koa ny mpanjakan'ny fanamboarana zava-pisotro sady iray amin'ireo mpanankarena mpanefoefo any Shina no nitaraina ny amin'ny fidangan'ny hetra sy ny sandan'ny tena orinasa ara-toekarena, na ireo izay mamokatra fananana sy asa, nandritra ny seminera ara-toekarena nokarakarain'ny vavahadin-tserasera amin'ny aterineto Netease. Nofintinin'i Liu Shengjun tao amin'ny Weibo ny fomba fijerin'i Zong :
Midangana be ny hetra sy ny sandan'ny tena orinasa ara-toekarena nefa kely ny tombony ka tsy ahafahan'ny orinasa sasany mivelona, sady betsaka ireo mpandraharaha no tsy te-hitojo intsony amin'ny toekarena marina. Tsy mbola nidina mihitsy ny fandaniana tamin'ity taona ity ; fa mifanohitra amin'izay, miakatra ny fandaniana sasany, indrindra ny fandaniana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, izay tena niakatra be mihitsy. Iray hetsy yuan na mihoatra ny 1 tapitrisa yuan mihitsy aza ny vidin'ny tany iray “mu” ( tokotokony ho 667 metatra tora-droa). Iza no sahy hampiasa vola amin'izany vidiny ambony be izany ? Tsy misy afa-tsy ny orinasam-panjakana no mitantana ny rano rehetra, ny herinaratra ary ny entona voajanahary. Mandany be ny fampiasana azy ireny sy ny fananganana orinasa vaovao. Kanefa, mila mandoa ny saran'ny fankatoavana ara-panjakana samy hafa ianao. Kanefa, tsy maintsy aloanao ny ampahatelon'ny tombana momba ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fahaizana manokana amina resaka angovo sy ny famokarana madio. Iza no sahy hampiasa vola raha toa ka midangana be ny vola miasa nefa tsy azo antoka ny ho tombony ?
Haingana be ny haino aman-jery fehezin'ny fanjakana Shinoa namaly izany mba hampitoniana ny firongatry ny hatezeram-bahoaka momba ny habetsaky ny vesatra apetraky ny governemanta amin'ny orinasa. Ny Global Times, gazety kely fehezin'ny antoko Kaominista, dia nanaparitaka lahatsoratra milaza fa tafahoatra loatra ny fametahana ny marika “mahafaty” ho an'ny tahan'ny hetra. Nohamafisin'ny @BlueWhale, vovonan'ny mpanao gazety ara-toekarena ny hevitry ny Global Times :
1. Raha ampitahaina amin'ny firenena mandroso dia tsy mavesatra loatra ny hetra any Shina amin'ny ambongadiny, saingy tena ambony be noho ny any Etazonia ny hetra takiana amin'ny orinasa ao Shina.
2. Mihena tsikelikely ny hetra takiana amin'ny orinasam-barotra taona vitsy lasa izay.
3. Raha lazaina amin'ny heviny hafa, dia tsy mifanaraka amin'ny fihenan'ny hetra ny fidinan'ny tombony, noho izany mahatsapa ireo orinasa sasany fa lasa mavesatra ny hetra.
4. « Ny havesatry ny hetra dia manery ireo mpandraharaha handositra» dia fanovàn-dresaka ataon'ireo orinasa shinoa any ivelany. Ny fahamaroana be loatra ao an-toerana no mitarika ho azy ny fandaozana ny firenena mba hivelarana.
5. Nanapa-kevitra ny hampihena bebe kokoa ny hetra takiana amin'ireo orinasa ny fivorian'ny foibe ara-toekarena.
6. Ny fifandonana eo amin'ny rafitra sy ny fomba fiasa no niteraka fidangànan'ny vola lany ho an'ny orinasa.
Ho an'ireo liberaly mpahay toekarena toa an'i Xu Chenggang, anefa, dia mihoatra lavitra noho ny tahan'ny hetra ny olana ara-toekarena any Shina. Nangatahany ny tena fanavaozana marina hiatrehana ireo olana maika ara-toekarena any Shina tao amin'ny resadresaka iray tamin'ny Caijing, haino aman-jery mpanome vaovao ara-toekarena malaza any Shina. Nofintinin'ny mpisera amin'ny Weibo amin'ny teny fohy ny fomba fijerin'i Xu :
Tsy afa-miala amin'ny fandrafetana ny endriky ny fanavaozana ny rafitra, raha tsy izany dia tsy hahasoa avokoa ny fepetra rehetra, tsy afaka hamaha ny tena olana. Ireo orinasam-panjakana amin'ny ankapobeny no nahatonga ny fahamaroana be loatra, nefa tsy mety ho bankiropitra. Raha tsy tsaboina ny olana fototra dia mety tsy hisy vokany ny fanovàna fotsiny ny fepetram-pitantànana. Tsy azo atao hoe fanovàna ny fanerena ireo orinasa hametra ny fahafahany na hanova ny vokatra vokariny.
Ho an'i Xu sy ireo hafa, ny fanavaozana marina dia ny fisintahan'ny fanjakana amin'ny orinasam-panjakana mba hanavaozana ny fifaninanana eo amin'ny tsena.